One Stop Service (OSS) | YRIC
APPLY FOR YRIC ENDORSEMENT
Yangon Region Investment
Forum Download Link 2019
Yangon Region Investment Forum Download Link 2019
DEPARTMENTAL COOPERATION TEAM - ONE STOP SERVICE (OSS )
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ လျောက်ထားရာတွင် ပါ၀င်ရမည့် အချက်များ
MIC မှ Capital In Kind စနစ်အရ အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမိန့် (မူရင်း + မိတ္တူ)
Invoice (မူရင်း + မိတ္တူ)
Sale Contract မိတ္တူ
လိုင်စင်(မိတ္တူ)/ Non-lincence ဖြစ်ကြောင်း၀န်ခံကတိ
Company မှ မူလအဆိုပြုချက်ပါ တန်ဖိုးများအတွင်းသာ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး မူလခွင့်ပြုတန်ဖိုးများ ပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်း ရှင်းလင်းချက်။
(A)MIC မှ Company သို့ ခွင့်ပြုစာရင်းချုပ်
(B) MIC မှ Company သို့ ခွင့်ပြုပြီးစာရင်းချုပ်
MIC မှထုတ်ပေးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိန့်(မိတ္တူ)
Form 6/26 (မိတ္တူ) / Company Profile (copy)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (မိတ္တူ)
Company မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်/ အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးဖြစ်သော ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူသည် အောက်ပါ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် ‌ ပါ၀င်ရမည့်အချက်များ
ကုမ္ပဏီ Latter Head ဖြင့်လျောက်လွှာ
အချက် (၅) ချက်ပါ၀န်ခံကတိ
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (CO ကဒ်)
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ခွင့်ပြုချက် (MIC Permit)
CMP လျောက်ထားရာတွင် စီပွားဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့်စာ
click to see more details Go to Commerce Website
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အတည်ပြုမိန့်များ ဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီများ၏စက်ပစ္စည်းများ စက်အပိုပစ္စည်းများ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း များ တင်သွင်းခွင့်လျောက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ကိုယ်တိုင်နှင့် MD လက်မှတ်ထိုးရန်) (ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်, လိပ်စာ, မှတ်ပုံတင်အမှတ်, လက်မှတ်, ဖုန်းနံပါတ်များ, ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်။ )
တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်း၏ Proforma Invoice
မူလ အဆိုပြချက် (MIC Proposal) တွင်ပါ၀င်သည့် စက်ပစ္စည်းစာရင်းမိတ္တူ
တင်သွင်းရန် လက်ကျန်စာရင်းရှင်းတမ်း (Balance Sheet)
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု‌ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ (MIC Permit)
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရခွင့်ပြုမိန့်နှင့်အတည်ပြုမိန့် ဆောင်ရွက်နေသောကုမ္ပဏီများမှ အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း လျောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ
တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ(ပညာရှင်များနှင့် မှီခိုသူများအတွက်)
MIC အဆိုပြုချက်ပါ ပြည်တွင်းပြည်ပ ၀န်ထမ်းဦးရေ စာရင်း
ခန့်အပ်ထားသော ပြည်တွင်းပြည်ပ ၀န်ထမ်းဦးရေ စာရင်း
နိုင်ငံခြားသား၏ CV Form
နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့်လျောက်လွှာပုံစံ (ပုံစံ-၁၂(က))
ကုမ္ပဏီ၏အလုပ်ခန့်စာချုပ် (labor contract)
EC စာချုပ် ( နေထိုင်ခွင့် ဒုတိယ အချိန် လျောက်ထားပါကတင်ပြရန် )
MIC ခွင့်ပြုမိန့် အတည်ပြုမိန့် မိတ္တူ
လက်ထပ်စာချုပ်(ပညာရှင်၏ မှီခိုသူ အိမ်ထောင်ဖက်များအတွက်)
Family List (ပညာရှင်၏မှီခိုသူမိဘများအတွက် (၆၀နှစ်ကျော် ))
မွေးစာရင်း (ပညာရှင်၏မှီခိုသူကလေးများ (၁၈နှစ်အောက်)အတွက်) [၁၈နှစ်ကျော်ပါက International School တက်နေကြောင်း ထောက်ခံချက် ]
OSS မှ နောက်ဆုံးထောက်ခံစာ
လေယာဉ်လက်မှတ်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းအခြားလုပ်ငန်းသို့ပြောင်းရွှေသွားကြောင်း တင်ပြစာ
DICA Website Link
Background History of Department of Fisheries
Departement of Fisheries is organized with the objectives of the conservation of fisheries resources, food securityof sustainable fish consumption and contribution of aquaculture technology for the people.
As the fisheries project section, Department of Fisheries was established with6officers and 70 staffs under Land and Rural Development Cooperation since June, 1954. On the date of 24th March 1961, Department of Fisheries was extended as Fisheries Division under Land and Rural Development Cooperation leading by one director including9officers and 183 staffs.
After emerging of new administrative system, Fisheries Division was transformed as Department of Fisheries leading by Director General with9officers and 183 staffs since 15th March 1972. In November 1984, temporary task force for the plan of action on revenue of fishing gear licenses was temporarily organized with the number of 216 staffs within 1984-85 fiscal year and 1986-87 fiscal year. Since April, 1985, the total numbers of 89 staffs from aquarium staffs under People’s Workforce Rehabilitation Association were transferred to Department of Fisheries under the Ministry of Agriculture and Forestry Affair.
Myanmar is one of the last countries of Asia to be revealed to the travelling world. Located between India, China and Thailand, the people of this enchanted land have developedaculture which has endured invasion and change by absorbing and taking the best from those around them and creating their own style and flair.
The Republic of the Union of Myanmar hasapopulation of over 51 million (2014 Census). The major racial groups are Bamar, Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Rakhine and Shan.
Myanmar lies on the crossroad of two of the world’s great civilizations – China and India – but its culture is neither that of India nor that of China exclusively,
လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ လျောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ
နေခွင့်သက်တမ်း (3)လ = 50USD
နေခွင့်သက်တမ်း (6)လ = 100USD
နေခွင့်သက်တမ်း (12)လ = 200USD
ပြည်ပသို့ တစ်ကြိမ်ပြန်ထွက်လျှင် = 60 USD
ပြည်ပသို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ထွက်လျှင် = 200 USD
Over Stay - (1) ရက်မှ ရက် (90) အတွင်း (1)ရက်ကို3USD
(90) ရက်ကျော်လျှင် (1)ရက်ကို5USD
MIC ခွင့်ပြုမိန့် မူရင်း + မိတ္တူ တစ်စုံဖြင့်တွဲတင်ရန်
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွင် အသုံးပြုသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပါ။
(၇) နှစ်အောက်မွေးစားရင်း လိုအပ်ပါသည်။
MIC မှ စာရွက်စာတမ်းများ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရခွင့် ပြုမိန့်သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် လျှပ်စစ်ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ်၊ ဘွိုင်လာအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှက်များ လျောက်ထားခြင်းနှင့် ပက်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကော်မရှင်၏တစ်နေရာတည်းတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ရှိ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဉီးစီးဌာနကိုယ်စားလှယ်မှ ရုံးထိုင်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
click to see more details Go to Ministery Of Industry Website
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမိန့် လျောက်ထားရာတွင် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ
ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါသော လျှောက်လွှာ
ကုမ္ပဏီမှ မူလအဆိုပြုချက်ပါ တန်ဖိုးများမအတွင်းသာတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်း ရှင်းလင်းချက်
MIC မှ ခွန်အ‌ကောက်ကင်းလွတ်ခွင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာ(မိတ္တူ)
Sale Contract (မိတ္တူ)
သွင်းကုန်လိုင်စင်မိတ္တူ/ Non-Lincence ဖြစ်ကြောင်း company ၀န်ခံကတိ
(A) ကုမ္ပဏီ၏အခွန်အ‌ကောက် ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်လျောက်ထားသည့်စာရင်း
(B) ကုမ္ပဏီ၏အခွန်အ‌ကောက် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီးစာရင်း
Company Profile (မိတ္တူ)
MIC ခွင့်ပြုမိန့် (မိတ္တူ)
ထုက်ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်မလက်စာရွက်စာတမ်းများ။
လျောက်လွှာ ( ကုမ္ပဏီမူရင်း Latter Head ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ပေးပို့ရမည်။ )
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကဒ် ထုတ်ယူမည့်သူ၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ( ကုမ္ပဏီမူရင်း Latter Head ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ပေးပို့ရမည်။ )
Employment Registeration Foreign Workers in Myanmar Form
Personal Data of Foreign Worker (CV Form)
Contract Of Employment ကုမ္ပဏီ၏သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလုပ်သမားရုံး၌ ချုပ်ဆိုထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ် (EC)
Passport Copy of Foreign Worker
ပြည်တွင်းအခွန်ဌာနသို့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား၏ လစာမှ ၀င်ငွေခွန်ပေးဆောင်မှု အခွန်ပြေစာသည်လေဘာတင်သည့်အချိန်တွင် Update ပေးဆောင်ထားပြီးသော နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား၏ လစာမှ ငွေခွန်ပေးသွင်း ထားသည့် ငွေသွင်းပြေစာမိတ်တူ။ (နိုင်ငံခြားသား၏ လစာ၀င်ငွေစာရင်း၌ ပူးတွဲလျက်)
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြား ဦးစီးဌာန၏ပို့/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်မိတ်တူ။
စက်မှုကြီးကြပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ။ (လျောက်ထားဆဲဖြစ်ပါက ထောက်ခံစာ)
မြန်မာနိုင်ငံရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့် (Permit)
Return Of all Allotments The Myanmar Companies Act (Form-VI)
Particulars of Driector, Manager and Managing Agents and of Any Changes There In (Form-XXVI)
မြန်မာနိုင်ငံရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကဒ်အသစ်ပြုလုပ်ခွင့်/ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ။
ဓါတ်ပုံ (၄)ပုံ။ (၆ လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော (၁ ၁/၂) လက်မ ပက်လည်ဓါတ်ပုံ)။
လေဘာတင်လျှင် Passport Stay ရှိရမည်။
ငွေသွင်းချလံ Address (လိပ်စာ)တွင် ကုမ္ပဏီ ထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြဖြစ်ပြီး Account No (စားရင်းအမှတ်)တွင် MD-010840(BUDGET) ဟုသေချာစွာ‌ရေးသားရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏၇၀%သည်ကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြပြီးအများစု၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။တစ်မျိုးသားလုံး၏ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဘိုး (GDP) ၏၃၀% ခန့်ကိုလယ်ယာကဏ္ဍမှရရှိသော်လည်းတောင်သူလယ်သမားအများစု၏လယ်ယာမြေနှင့်ပတ်သက်သောအကျိုးခံစားခွင့်အလွန်နည်းပါးလှပြီး၎င်းတို့၏လူမှုစီးပွားဘဝသည်နိမ့်ကျလျက်ရှိပါသည်။
လယ်ယာနှင့်သစ်တောဝန်ကြီးဌာနကို ဝန်ကြီးရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနနှင့် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတို့ဖြင့် ဦးစွာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ ဝန်ကြီးများရုံးတွင် ရုံးတည်ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ သီရိမင်္ဂလာ လမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနဝင်းအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးသို့ ရုံး ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
Ministery Of Hotel and Tourism
MONREC WEBSITE LINK
ONE STOP SERVICE TEAM(OSS)
Directorate of Investment and Company Administration(DICA)
Daw Moe Kyi Win
Daw wint Wint Tun
U Khin Maung Nyunt
U Mg Mg Aung
U Aye Chan
Yangon Electricity Power Supply Corporation
Daw May Soe Mon
Daw Hnin Yu
Daw Win Win Than
Phone No. - 01 658144
Phone No. - 01 658263
No.49, Sein Lae May Lane, Kabar Aye Road, Yankin Township , Yangon